Amacebiso okhuseleko okukhetha indawo - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Amacebiso okhuseleko okukhetha indawo – inqaku loncedo
Ukuthatha uhambo ngokuqhelekileyo kuthetha ukusebenzisa ixesha nemali yakho. Ufuna ukuqinisekisa ukuba ufumana indawo ekufaneleyo. Nanga amanye amacebiso okukunceda uhambe ngokuzithemba, usazi ukuba wenze isigqibo esichanileyo.
Ukufumana indawo ekulungeleyo
Funda imilinganiselo nezimvo
Hlola izinto zokhuseleko
Soloko uncokola uze ubhatale ngoAirbnb
Okokuqala, fumana indawo enezinto ozidingayo ngokusebenzisa izihluzi zethu zokukhangela ezininzi. Xa ubona indawo oyithanda kakhulu, ziphe ixesha lokufunda iprofayile yoMbuki Zindwendwe nengcaciso yendlu, uhlole kakuhle izinto ezinokusetyenziswa, imithetho yekhaya nepolisi yokurhoxa.
Sisoloko sicebisa ukuba ufunde izimvo zezinye iindwendwe ukuze ufumane indawo ekulungeleyo. Uza kufumana imilinganiselo kwizinto ezifana nokucoceka nokuchana kunye nezimvo ezineenkcukacha zabanye abahambi. Iindwendwe zinokushiya uluvo kuphela emva kohambo lwazo, ngoko uyazi ukuba uluvo olufundayo lolomntu okhe wahlala nyani kulo ndawo.
Kuhle ukujonga umatshini okulumkisayo xa kukho umsi nealam yomsi otyhefayo kwindlu, ezo zinto ungazifumana kuludwe lwezinto ezinokusetyenziswa phantsi kwendawo ethi Ukhuseleko lwendlu.
Funda okungakumbi ngealam yomsi neyomoya otyhefayo Kwiziko Loncedo.
Isixhobo sethu sokuthumela imiyalezo ngendlela ekhuselekileyo sikhuselekile ibe yindlela elula yokubuza umntu onokuba nguMbuki Zindwendwe wakho imibuzo onayo ngaphambi kokubhukisha. Emva kokubhukisha, ungamthumelela umyalezo wokulungiselela ukubhalisa xa ufika, ubuze imibuzo engakumbi uze uqhakamshelane naye ebudeni bohambo lwakho.
Yenza indlela obhatala ngayo neenkcukacha zakho zisoloko zikhuselekile ngokuhlala usebenzisa iwebhusayithi yethu ekhuselekileyo kuyo yonke le nkqubo—ukususela ekuncokoleni ukuya ekubhukisheni nasekubhataleni. Awufanele ucelwe ukuba uthumele imali kwi-intanethi, udlulisele iinkcukacha zekhadi lokuthenga ngetyala okanye kuthiwe bhatala Umbuki Zindwendwe ngqo. Ukuba le nto iyenzeka, nceda uyixele loo nto kuthi kwangoko.
Xa ufikile, kuhle ukukhangela ukuba indawoni inkcazelo yokhuseleko nezixhobo zemeko yongxamiseko, njengento yokucima umlilo nezinto zoncedo lokuqala. Ukuba awuqinisekanga ukuba indawoni into, khawuleza ubuze Umbuki Zindwendwe wakho. Kungcono ukuhlala ulungile.
Nokuba uhamba ngoAirbnb okanye akunjalo, bubulumko ukuphanda ngendawo oya kuyo kwangaphambili uze ubuze ngazo naziphi na izilumkiso zohambo okanye izinto ezikhethekileyo ezifunekayo kwiziko loonozakuzaku lasekuhlaleni. Ngokomzekelo, abahambi abavela eMerika bafanele babuze kwiUS Department of State ngenkcazelo ye-visa nezilumkiso zohambo.
Funda okungakumbi kwiphepha lethu Lokuthembana Nokhuseleko.
Khumbula: Kwimeko yongxamiseko, okanye ukuba usengozini, qhakamshelana namapolisa asekuhlaleni okanye iinkonzo zemeko yongxamiseko kwangoko.
Amacebiso okhuseleko xa uhamba nabantwana
Funda indlela yokwenza indawo yakho ikhuseleke ngakumbi ebantwaneni xa uhamba.